Isamsung W2018 izakwaziswa ngoNovemba 9 | I-Androidsis
Emva kokuphehlelelwa kutsha nje okwenziwe nguMzantsi Korea kwinyanga ephelileyo, kubandakanya I-Galaxy A9 (2018) y I-Galaxy A6sInkampani inomboniso omtsha engqondweni, njengoko ibhengeze ukuba izakuba nomnye umsitho e-China ngo-Novemba ngo-9 kwaye, enkosi kwipowusta etyhiliweyo, sinokuqinisekisa ukuba yeyokwazisa umnxeba. I-Samsung W2019, owangena ezihlangwini zika W2018 Ikhutshwe ekuqaleni kukaDisemba 2017.
I-Samsung W2019 yiyo Uluhlu lweSamsung yakutshanje ye-W 'Series Phone' ibhengeziwe, kwaye iya kuba ye-China kuphela. Bekuvuza kwi-intanethi okwethutyana ngoku, kodwa kuphela yimifanekiso eqikelelweyo kunye nezinye izinto ezinokubakho kunye neenkcukacha zobuchwephesha ezityhiliweyo.
Kunyaka ophelileyo, uthotho lwe-W luye lwasebenza njengendawo yokuvavanya ezinye zeempawu ezathi zamkelwa yiSamsung kwezinye iiflegi zayo. Njengokuba, Imodeli yonyaka ophelileyo yayiyeyokuqala ukuba nekhamera enendawo evulekileyo eyahlukileyo. Asikeva nangayiphi na into ekhethekileyo yale smartphone. Nangona kunjalo, eminye imifanekiso evuzayo iqinisekisile ukuba iza kuza neekhamera ezimbini ezingasemva ezinje nge Galaxy Note 9 kunye Galaxy S9 +.
I-Samsung W2019 kulindeleke ukuba ize nemiboniso emibini ye-4.2-intshi, iprosesa ye-Snapdragon 845 okanye i-Exynos 9810 kunye nebhetri yomthamo eyi-3.000 mAh. Iya kuba ne-6 okanye i-8 GB ye-RAM kunye nobuncinci be-64 GB yendawo yokugcina yangaphakathi. Yintoni egqithisile, Uya kuswela i-jack audioNjenge-W2018, iya kuba noyilo oluhlaziyiweyo kodwa iyafana nale kwaye iya kuba nezinto ezinomdla, ezinje ngokuqaphela ubuso, inkxaso yokutshaja ngokukhawuleza, Itekhnoloji ye-NFC yokuhlawula, iqhosha lomncedisi weBixby kunye nezinye ezininzi. Kokunye, sinokulinda kuphela ukuba inkampani isothuse, kwaye loluphi ukhetho olungcono ngaphandle kokuthengisa kwamanye amazwe kwesi sixhobo? Siza kubona.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Ifowuni 'ye-clamshell' ye-Samsung W2019 sele inomhla wokumiliselwa, kwaye ingoNovemba olandelayo
IVivo Y93 isungula nge-6.2 "HD + isikrini, i-Snapdragon 439 kunye nokunye